अङ्गुर Zilga: विविधता, रोपण, हेरविचार, सुविधा र समीक्षा विवरण
अङ्गुर को धेरै किसिमहरु बीचमा उत्तरी क्षेत्रहरु को उत्पादक neukryvnyh तरिका हुर्किसकेका गर्न सकिन्छ कि हार्डी प्रजातिहरू आकर्षित छन् अङ्गुर ठूलो ध्यान। तिनीहरूलाई को - अंगूर प्रजातिहरू Zilga।
अङ्गुर Zilga 1964 लातवियाई ब्रीडर पी Sukatnieksom मा स्थापित। अङ्गुर विविधता Smuglyanka पराग रूसी प्रजनन प्रजातिहरू Jubilee नोभगोरोड र लातवियाई Dvietesa को एक मिश्रण मतगणना।
यसलाई व्यापक लिथुआनिया र लाटविया मा वितरण गरिएको छ। बेलारुस प्रयोग, र जहाँ विविधता बहुमत पनि sheltered तरिका हुर्किसकेका गर्न सकिँदैन कठोर जलवायु, अन्य क्षेत्रहरु। त्यहाँ अङ्गुरको सफलतापूर्वक बढ्न Zilga।
विविधता को विवरण
अङ्गुर प्रजातिहरू Zilga - यूरो-अमेरिकी संकर। यो धेरै प्रारम्भिक 120-125 दिनको लागि, परिपक्व। मध्यम उचाइ को Grafted shrub, आफ्नै-गाडेको - माथि औसत।
सम्पूर्ण वा अलिकति तीन ब्लेड संग lobed, छोड्छ। तिनीहरूले ठूलो बाक्लो, तल को एक सानो स्पर्श ढाकिएको छन्। को दाखको बोट राम्रो परिपक्व छ। यी बहुमूल्य अङ्गुर Zilga। यसको जामुन को एक विवरण पछि प्रस्तुत गरिएको छ।
फूल अङ्गुर Zilga बिसेकषिल। pollination पछि आफ्नो ठाउँमा अप3जामुन को रंग मा वर्ष गर्न किसिम को नाम संकेत, एक मध्यम आकारको जामुन गठन। "Zilga" रूसी हालतमा मा "bluish।" जामुन र साँच्चै, bluish बैजनी, एक bluish ब्लूम ढाकिएको।
स्वाद गुणस्तर 3.2 अंक मा मूल्याङ्कन Zilga tasters अंगूर। यो देखिने ज्ञात Isabella टिप्पणी। पाकेको फल जेली को मज्जा, श्लेम लाग्एको। बैजनी रस, सुगन्धित। बाक्लो छाला अंगूर Zilga छ। प्रयोगकर्ता समीक्षा कि यो एक झोला को रूप मा जामुन हटाइएको छ भन्छन्। प्रत्येक बेरी 2-3 बरु ठूलो अन्न छ।
2 वा3छोटो छाडा समूहहरु द्वारा गठन प्रत्येक शूटिंग मा। औसत मा, एक आफ्नो खाता 1.3 पलायन। एक प्याडल वा क्रूज - फारम समूहहरु चोटीदार, एक आधार सिलिण्डर कम से कम हुन सक्छ। एउटै क्लस्टर मा जामुन को संख्या - 50. वजन गर्न - 120 ग्राम, औसत - 88 G।
औसतमा एक झाडी फल 12 किलो गर्न प्राप्त भएको छ।
यो लेट अगस्ट Zilga अङ्गुर मा ripens। समीक्षा माली सूर्य podvyalivayas, को जामुन संकलित छैन भने तिनीहरू झुन्डियो लामो समय हुनेछ भनेर भन्न। तिनीहरूले wasps बिगार्छ भने, फल sweeter हुनेछ र पनि किसमिस परिणत हुन सक्छ।
जाडो hardiness धेरै उच्च ग्रेड छ। ब्रश 32 डिग्री सेल्सियसमा तापमान lowering राखिएको। तसर्थ, तिनीहरूले शायद चिसो छन् जहाँ क्षेत्रहरु मा कवर गर्न सक्दैन।
विविधता रोग अपेक्षाकृत प्रतिरोधी छ। तर Fungi सक्रिय विकसित गर्दै छन् जब वर्षाको गर्मी, फफूंदी, powdery फफूंदी र botrytis प्रभावित हुन सक्छ। यी रोगहरु विरुद्ध लड्न डिजाइन लागूपदार्थ संग उपचार।
अङ्गुर विशेष कठोर जलवायु संग क्षेत्रहरु लागि डिजाइन Zilga। यो उत्तरी क्षेत्रहरु बढ्दै neukryvnyh डिजाइन गरिएको छ।
विभिन्न तरिकामा प्रयोग:
Zilga धेरै तरिकामा अङ्गुर बढ्न:
cuttings देखि अङ्गुर बढ्न सजिलो;
cuttings - सबै भन्दा राम्रो तरिका जवान बोटहरू प्राप्त गर्न। दुर्भाग्यवश, यो सम्भावना सधैं छ;
को बिरुवा खरिद। निस्सन्देह, पहिले त्यो कसैले माथि विधिहरू को एक साथ एक sapling बढ्न छ।
लगाए बोटहरू औसत दैनिक तापमान को राशि सकेसम्म धेरै हुनेछ जहाँ ठाउँमा आवश्यक छ। अङ्गुर धेरै गर्मी र प्रकाश गर्न माग छन्। को छाया बढ्न सक्नुहुन्छ, तर प्रतीक्षा गर्न बाली समस्याग्रस्त छ लागि। त्यहाँ बाहेक यो रोग सबैभन्दा susceptible छ।
रोपण अङ्गुर Zilga
कन्टेनर देखि गाडेको बिरुवा रोपे भने, एडी को जरा त्यहाँ माथि जमीन स्तर तल 15 सेमी हुन् भनेर नबिर्सनुहोस्। तिनीहरूले 40 सेन्टीमिटरको गहिराइमा राखिएको हुनुपर्छ।
यदि यो गरेको सकिँदैन किनभने छोटो बोटहरू को, सुतेको जस्तै समय सम्म बाटो रोपण को दाखको बोट इच्छित उचाइ एक बढ्न गर्दैन रूपमा लागि प्वाल पर्नु छैन। र यो 40 सेमी भन्दा sapling अब किन्न राम्रो छ।
लागि प्वाल अंगूर को रोपण गहिराई मा सेमी छैन कम 60 भन्दा खन्नुहोस्। पोषक र ट्रेस तत्व थपेर माटो तयार। ग्रेड Zilga अङ्गुर तथापि, Isabella छाया को स्वाद मा उपस्थिति अमेरिकी दृश्य Labruska संग सम्बन्ध संकेत7को एक तटस्थ पीएच संग माटो मा सबै भन्दा राम्रो बढ्न कि यूरो-अमेरिकी संकर पर्छ। र यस्तो प्रजातिहरू सूचक पीएच 5,5-6,5 संग अलिकति अम्लीय soils मा सबै भन्दा राम्रो बढ्न। तसर्थ, माटो Liming शायद ठाउँ बाहिर हुनेछ। Deoxidizer वृद्धि प्रक्रिया मा, भविष्यमा थप गर्नुपर्छ।
पङ्क्ति मा 1.252मिटर देखि - को ब्रश बीच दूरी। ब्रश प्रजातिहरू Zilga जोडदार, त्यसैले तपाईं हेर्न, आफ्नो मुकुट पाहुना आवश्यक छ।
उत्तरी क्षेत्रहरु मा, अङ्गुर Zilga राम्रो पत्थर पर्खाल को दक्षिण पक्षमा लगाए। यो हावा बाट hive रक्षा, र सूर्य गरेको रेज पर्खालहरु बन्द शेखी, बुश वरिपरि माटो को सतह मा तापमान मा वृद्धि गर्न योगदान गर्नेछ।
हामी भविष्यमा आधार पानी खडा गर्दैन भनेर, एक झाडी रोपेर गर्न आवश्यक छ। अङ्गुर waterlogging रुचि छैन।
अङ्गुर नुन को एक ठूलो रकम जसमा दानेदार मल, खाद गर्नुपर्छ तर छैन। जैविक rotted मल प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
भएको षड्यन्त्र भएको बोटहरू सामा र घाँस पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ। यो वृद्धि, fruiting र पकने लागि धेरै उपयोगी छ जो राम्रो पृथ्वी, अप न्यानो गर्न मद्दत गर्छ।
सामा यसलाई खराब र जाडो सहन बुरा बढ्दै छ किन जो छ, अङ्गुर बाधित गर्न सक्नुहुन्छ। केही जंगली बोट अंगूर लागि हानिकारक पदार्थ फेंकना।
बैगुन, आलु, टमाटर, खुर्सानी: एउटै केही बाली प्रभावित।
प्रत्येक hive, तपाईं विकास को लागि एक अधिक आरामदायक वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। रोपण अघि प्वाल तल मा ईटाहरु बिछाउने, उत्तरका पक्षमा पृथ्वी पहाडी छिडकाव, गाढा, गाढा फिलिम को प्लास्टिक बोतल को प्रयोग: यो गर्न, धेरै तरिकाहरू छन्।
बुश लागि हेरविचार को एक महत्वपूर्ण भाग - अङ्गुर टीन। हामी माटो को सुकाउने दिंदैनौं।
लहरा जीवनको दोस्रो वर्ष फारम गर्न थाल्छन्। कि पहिला उहाँले खुलेर बढ्न गर्न अनुमति दिएको छ। बलियो भएको आस्तीन मा अनुमति छन् stems को तेस्रो वर्ष केही चयन गरिएको छैन। बाँकी मार हटाइयो। बुश र वृद्धि अवस्थाको बल द्वारा निर्धारित आस्तीन को संख्या।
कुनै पनि प्रारम्भिक विविधता जस्तै अङ्गुर Zilga lashes को एक ठूलो संख्या को गठन गर्न खतरा। यदि तिनीहरूले हटाइएको छैन गरिन्छ, दाखको बोट उत्तरी क्षेत्रहरु परिपक्व र podmerznet जाडो समय छैन। दक्षिण मा चिसो द्वारा क्षतिग्रस्त हुनेछ, र झाडी बुना शाखा को एक बल मा परिणत हुनेछ। यदि पनि जामुन र त्यहाँ पाकेको zavyazhutsya, तिनीहरूलाई अत्यन्तै कठिन हुनेछ इकट्ठा।
यो हरेक वर्ष बाँया भन्दा एकदम अधिक शाखा हटाउने बाहिर जान्छ। कहिलेकाहीं यो झाडी रिकभर गर्न धेरै वर्ष आवश्यक हुनेछ जस्तो देखिन्छ। तर यस झाडी र बाली मात्र लाभ छ।
दाखको बोट Zilga छिट्टै। एक फाल्नु मा 5-7 तन्तु छोड्नुहोस्। छाँट्ने सबै भन्दा राम्रो जाडो को ब्रश लागि आश्रय अघि, गिरावट गरिन्छ। सायद, यो lashes को वसन्त मा व्यर्थ हुनेछ। त्यसपछि तिनीहरूले सुरक्षित हटाउन सकिँदैन। तर चिसो द्वारा क्षतिग्रस्त छ जो झाडी, मा शाखा हटाउन हतार छैन। त्यहाँ मृगौला पछि प्रस्थान गर्नेछ एक उच्च सम्भावना छ।
कुनै पनि कारण लागि भने शरद ऋतु मा कट बोटहरू प्रारम्भिक वसन्त मा त्यसो गर्न असफल भयो। छाँट्ने पछि दाखको बोट पक्कै "रुन", तर अझै पनि परिणाम खतना झाडी भन्दा राम्रो हुनेछ।
छाँट्ने अर्को समारोह कार्य गर्दछ। यस कार्यका लागि धन्यवाद, एक वयस्क झाडी को मात्रा तपाईं सही फ्रेम मा समर्थन गर्न सक्दैन।
रोपण र बढ्दै ओखर
गर्मी स्ट्रिप स्याउको रूख: विविधता को विवरण, समय पकने। वसन्त मा एक स्याउको रूख कसरी रोपेर गर्न
आफ्नो हातले चिकित्सा droppers को ड्रिप सिंचाई
कसरी घर मा asters को बिरुवा बढ्न?
बहुमूल्य सुनगाभाहरू। सुनगाभाहरू प्रजाति। सेतो आर्किड: घर मा हेरविचार
संयंत्र हानिकारक जोगिन गर्न peony कसरी प्रत्यारोपण गर्न
रणनीति - लडाइँका विज्ञान
बाख्रा दूध: प्रति 100 ग्राम को ताप सामग्री, उपयोगी गुणहरू
आर्थिक दबाब र राज्य मा स्थिति यसको प्रभाव
धातु मोन्टेरेरी को रंग
को Altai पहाड के हो? Altai को गणतन्त्र को काखमा को कोट र झण्डा
Nikolai Lavrov - जीवनी र सिनेमा
1940 मर्सिडिज बेञ्ज 320 डब्ल्यू-142 aerodynamic परिवर्तनीय Wendler
स्टाइलिश र सुरुचिपूर्ण: बेडरूम मा पर्दे
"Sampo" मा रूपमा पासपोर्ट देखाउन? अन्य उपयोगी आदेशहरू धेरै
आपराधिक व्यवस्था को अवधारणा: समय मा विकास
आधुनिक समाजमा जीव को भूमिका